NCC Bank Limited(NCC Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
कोरोना रोकथामका लागि एनसीसी बैंकले रु. १ करोड सहयोग गर्ने
काठमाण्डौ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका संघीय र प्रादेशिक कोषहरुमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालका अनुसार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केन्द्रमा बनाइएको सहयोग कोषमा ६५ लाख...
दोस्रो त्रैमाससम्म एनसीसी बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हेरौँ
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएकोछ। बैंकको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २.२२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ७३ करोड ९८ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थि...
एनसीसी बैंकद्वारा १५% बोनस सेयरको प्रस्ताव पारित, पूँजी रु.९.३५ अर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमिटेडको साधारणसभाले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि चुक्तापूँजी ०.७८९४७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । माघ १७ गते सम्पन्न २२ औं वार्षिक साधारणसभाले संचालक समितिको बैठकबाट भएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गरेको हो । संचालक...
एनसीसी बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, बोनस सेयर कति ?
काठमाडौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज सोमबार अन्तिम मौका रहेको छ । बैंक वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि भोलि (माघ ७ गते) एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ आजसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र बैंकको वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन र लाभांश...
पूर्वको मोतीका रुपमा परिचित तमोर जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा आज भएको समझदारीपत्रमा बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी...
एनसीसी बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर प्रक्रिया थाल्ने र गत आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्ने मुख्य अजेन्डासहित नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले आफ्नो २२ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । संस्थाको हिजो बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो माघ १७ गते शुक्रबार...
एनसीसी बैंकले प्रस्ताव गर्यो बोनस सेयर, कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको हिजो आइतबार दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजी १५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब २२...
एनसीसी बैंकको ऋणपत्र निष्काशन गर्न नबिल इन्भेष्टेन्ट बैंकिङसँग सम्झौता
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडले “१०.५० प्रतिशत एनसीसी ऋणपत्र २०८६” ३ अर्ब बराबरको डिबेन्चर १०.५०% व्याज सहित दश वर्षको लागि निष्काशन गर्न नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । एनसीसी बैंकको कूल ३०,००,००० कित्ता डिबेन्चरमध्ये १८,००,००० कित्ता डिबेन्चर व्यक्तिगत तवरबाट र...
एनसीसी बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा सहुलियत पाउने
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबीच बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकmलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार अब एनसीसी बैंकका कर्मचारी तथा...
एनसीसी बैंकद्वारा शिवपुरी माविलाई रु. ४ लाख सहयोग
काठमाण्डौ । एनसीसी बैंकले प्रदेश नं. ३, काठमाण्डौ जिल्लाको महाराजगञ्ज स्थित शिवपुरी माध्यमिक विधालयलाई बैशाख १० गते रु. ४ लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । शिवपुरी माध्यमिक विधालयमा अध्ययनरत स–साना नानीहरुका लागि सूचना प्रविधिमा पँहुच पुर्याउन तथा आवश्यक खेलकूद सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्न बैंकले आफ्नो संस्थागत उत्तरदायीत्व...
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडले सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका–८ मलंगवामा भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा ल्याएको छ । एक्सटेन्सन काउन्टर कार्यालयको मलंगवा नगरपालिका मेयर निर्सल साहले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच समुद्घाटन गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता मेयर साहले...